के तपाईलाई थाहा छ: जुत्ताको आविष्कार कसले गर्‍यो ? कहावाट शुरु भयो .. – Ujyaalo Patrika
के तपाईलाई थाहा छ: जुत्ताको आविष्कार कसले गर्‍यो ? कहावाट शुरु भयो ..
प्राचीन कालमा शि’कार गर्ने क्रममा आदिमानवहरुले नांगो खुट्टाले नै ढुंगाहरुको भूमिमाथि, बन जंगल तथा डाँडा काँडातिर हिँड्डुल गर्न तथा दौडनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी नांगो खुट्टाले हिँड्दा, दौड्दा ढुंगा तथा काँडाले घोचेर अति नै पीडा दिन्थ्यो । त्यसैले आदिमानवहरुले आफ्नो खुट्टालाई ढुंगा– काँडाहरुले घोचिनबाट जोगाउनको लागि खुट्टालाई ढाक्नुपर्ने महसूस गरे । त्यसका लागि उनीहरुले घाँसको मुठो, काठको टुक्रा, भुत्लायुक्त छाला जस्ता कुराहरुलाई खुट्टामा बाँध्न थाले । यो नै जुत्ताको प्राचीन रुप थियो ।
Next यो हो फूटबल मैदानभन्दा लामो पखेटा भएको संसारको सबैभन्दा ठूलो विमान